Alenziwe isiikumbuzo igquma laseMakikana -Seoka | isiZulu
Alenziwe isiikumbuzo igquma laseMakikana -Seoka
Idinga uxhaso imindeni yolwaseMarikana
Akudedelwe iMarikana 4 - Inhlangano
Iyaqhubeka iKhomishana kaFarlam
Rustenburg - Igquma laseMarikana la kwadutshulelwa khona abavukuzi abangu-34 mhlaka-16 Agasti, bedutshulwa ngamaphoyisa, kumele lenziwe indawo yesikhumbuzo, kusho umengameli weSA Council of Churches umbhishobhi uJohannes Seoka.
Ngesikhathi ephetha ubufakazi bakhe ngaphambi kweKhomishana kaFarlam, umbhishobhi uSeoka ucele ikhomishana ukuthi yenze isiphakamiso sokuthi leli gquma ekwabulawelwa kulo abavukuzi lenziwe indawo yesikhumbuzo.
"Ngokwesiko labantu base-Afrika, kunenkolelo yokuthi le ndawo isiyindawo eyehlukile kuna le eyabe iyiyo phambili. Baningi kakhulu abantu abashonela kuyo, kunemiphefumulo ekusakholakala ukuthi ikhona kule ndawo," kusho uSeoka.
"Uma lokhu kuphumelela kuyoba yingxenye yokuthoba abanxeba alaba abalahlekelwa ngabathandiweyo babo. Inhlekelele yaseMarikana kumele idale izisombululo zokwenza iNingizimu Afrika izwe elingcono."
USeoka ube esecela ukuthi ikhomishana izothe kukhunjulwe abantu abangu-44 abashona eMarikana.
"Angikhumbuli ukuthi sake sabahlonipha laba abashona, ngiyacela siphakame sigebise amakhanda sithi ukubakhumbula," esho.
I-ANC eKZN isikulungele ukuya okhethweni
Ubuholi be-ANC bugculisekile ngokuthi isifundazwe sakwaZulu-Natal nawo wonke amagatsha akhona akulungele ukuba nenkomfa yokhetho.
Kusamisiwe ukufunda eMahikeng kulandela imibhikisho
Abasolwa abangu-23 baboshwelwe amacala okulimaza impahla yomphakathi kanye nodlame lwasemphakathini ngesikhathi kunombhikisho eMahikeng.